Izvo Zvakanakisa Tech Zvipo zveZuva raBaba Gadget nhau
El zuva rababa Kurume 19 kunouya kunotevera uye pamwe inguva yakanaka yekumuratidza kuti unomuda zvakadii nechipo chinonakidza. Izvo zvinopfeka zvaunoda kuyedza zvakanyanya, mamwe mahedhifoni matsva kana masipika, kana kunyangwe chako chigadzirwa chekutanga nemubatsiri wezwi kuti iwe ugone kuona mabhenefiti mazhinji ekushanda kwayo.
Neichi chikonzero, uye nekuti isu tinoda kuita kuti hupenyu hwako huve nyore muActualidad Gadget, Tinokuunzira mamwe emagetsi anonakidza kupa paZuva raBaba, tarisa uye ushamise baba vako nenzira yepakutanga.
Semazuva ese, uye zvinoenderana neyedu yekunyora mutsara, kuActualidad Gadget isu tinongokurudzira zvigadzirwa zvatinoongorora pane webhusaiti yedu uye zvinosangana nemhando yepamusoro, tichigara tichifunga huwandu hwehunhu / mutengo.
1 Mahedhifoni uye anopfeka
2 Vakurukuri vakangwara uye zvemultimedia zvemukati
3 Kuvaraidza nezvimwewo
Mahedhifoni uye anopfeka
Isu tinotanga nekurudziro yemahedhifoni, uye mune ino kesi tinoenda kune chimwe chezvazvino zvigadzirwa zvatakaongorora, iyo Huawei FreeBuds 4i, mahedhifoni anouya nemazhinji ezvakanakira izvo iyo Huawei FreeBuds Pro yaitove nayo, asi iine hukama yemhando isingarwike / mutengo uchifunga imwe yemahara yavakapa. Ivo vane yekushomeka ruzha kudzima, bhatiri rakakura kupfuura maawa manomwe ekuenderera mberi kwekutamba uye nemhando yepamusoro yepamusoro odhiyo. Mutengo wekuvhura i € 69 kana tikatora mukana we € 10 dhisikaundi pane yepamutemo webhusaiti yeHuawei.
Tenga Huawei FreeBuds 4i nemutengo wakanakisa paAmazon.
Kana izvo zvauri kutsvaga chiri chigadzirwa chimwe chinhu shomaKuActualidad Gadget isu tayedzawo ruzha-kudzima mahedhifoni mahedhifoni. Mune ino kesi, iwo akatishamisa isu zvakanyanya nehunhu / mutengo muyero vanga vari X NaKygo A11 / 800, mahedhifoni anotengeswa mune maviri mavara akasiyana uye anopa yekubata pani, inoshanda ruzha kukanzura, kunyorera pamwe nekugadziriswa kwayo uye zvimwe zvakawanda pamutengo wekuparadza wema69,90 euros.
Kune chikamu chayo, isu tava kutendeukira kuma smart watches, imwe yeakakurumbira "zvipfeko". Isu tinodzoka zvakare kuHuawei, uye ndeyekuti yayo Watch GT 2 Pro Iyo yakamisikidzwa sedhiyo inowirirana nezvose zviri zviviri Android uye iOS. Icho chigadzirwa chakatenderedza chine zvigadzirwa zveprimiyamu, tambo dzinoenderana uye yakakwira tsika yekugadzirisa nekuda kwayo shopu yekutengesa. Unogona kuiwana kubva ku199 euros mune dzimwe nzvimbo dzekutengesa, ichikubvumidza iwe kusangana neyedu mhando / mutengo zvinodiwa.
Uye yekupedzisira sarudzo iri chaizvo zvakare imwe yemidziyo yekupedzisira iyo yatakaedza, iyo Jabra Elite 75t, mahedhifoni ane waya isina waya, yakakwira yekupokana, yakanyanya compact kesi uye zvakanakira kushandisa Jabra Sound +, ehe, Jabra Elite 75t -...
Vakurukuri vakangwara uye zvemultimedia zvemukati
Matauri akachenjera ndiwo marongero ezuva uye haakwanise kushayikwa kubva pasuru yedu yemazano. Zviripachena tinotanga nekupinda, iyo nyowani Amazon Echo Dot, chishandiso icho kunyangwe hazvo "chakadziviswa" saizi yakakura zvakanyanya. Dhizaini yacho inokwezva, unogona kuitenga mumhando nhatu dzemavara uye kunyangwe kana uchida kuti ikupe mukana wekusanganisira wachi, ichave "yakasarudzika" pane husiku hwababa vako. Mutengo uyu makumi mana nemakumi mana emamiriyoni eiyo vhezheni isina wachi, kunyangwe iyo vhezheni ine wachi ichikwira kusvika makumi mashanu neshanu euros.
Kana izvo zvauri kutsvaga pachinzvimbo chiri chakanaka multimedia player, tinokurudzira iyo nyowani Amazon Fire TV Cube, iyo yepamusoro vhezheni ine Fire TV OS iyo inokutendera iwe kuti uwane maapplication, isa maAAPK maAPU, tarisa Netflix, HBO uye Movistar + zvemukati mune yakakwira resolution (inosvika ku4K inoenderana). Mune yayo yemhando / mutengo muyero, ndiyo yakanakisa multimedia varaidzo nzvimbo yeavo vese isu takaedza, iko nyore kushandisa kuri padanho rezvasara zvezvigadzirwa. Kunyange chiri chokwadi kuti mutengo waro wepamutemo uri 119 euros, muzviitiko zvakawanda pane zvakachipa zvakadzokororwa uye zvinopa chinzvimbo icho kuma 79 euros.
Nenzira imwecheteyo, tinogona kuperekedza zvigadzirwa izvi neruzha rwemhando yepamusoro, mune iyi nyaya iwe unotoziva kuti isu tinowanzo kurudzira Sonos Beam, rinova iro rakazara bharanzi raunogona kuisa mumba mako, kana kukundikana izvo, Sonos Imwe, yekutanga nzira yekuswedera padyo nenzvimbo yeSonos nemutengo wakanakisa, asi sezvo tiri kutaura nezvema multimedia nzvimbo, takagara muyero / mutengo muyero uye kubheja pane inonyanya kukosha, iyo Sonos Arc. Hatigone kutaura chero chinhu chausingazive, Dolby Atmos, masetingi akareba, Alexa, Google Imba uye Apple HomeKit zvakanyatsobatanidzwa ... Chikonzero chete chekusatenga icho ndechekuti inodhura 899 euros, asi iye akafanirwa nazvo, pasina kupokana.
Isu takakupa iyo yakakwana pakiti yekupinda Alexa uye isa yako Spotify kana Apple Music mimhanzi kune yepamusoro, zvigadzirwa zvemitengo mitatu yakasiyana uye inozadzisa zvese zvivimbiso zvayo.
Zvekuvaraidza sezvataigara tichitengesa pakuverenga, takatanga neKobo Nia, chimwe chezvinhu zvinokurudzirwa zvigadzirwa kubva kune yedu hanzvadzi webhusaiti TodoeReaders, chigadzirwa chakanyatso fambiswa, chine hunhu hwakanyanya kugadziridzwa pamutengo wechigadzirwa uye izvo zvinogona kuita kuti baba vako vazopedzisira vaverenga kuverenga kwedhijitari, mabhuku emagetsi anochengetedza mari yakawanda uye ivo vari yakanyanyisa kuita.
Kana izvo zvauri kutsvaga iri piritsi rakazara, zvinonetsa kuwana hukama huri nani mhando / mutengo kupfuura Huawei's MatePad 10.4. Aya ndiwo maratidziro ehunyanzvi ehunyanzvi:
Kuchengetedza: 64 GB ine microSD kuwedzera kusvika ku512 GB
Screen: 10,4-inch IPS LCD pani pane 2K resolution (2000 x 1200)
Mberi kamera: 8MP Wide Angle ine FHD kurekodha
Rear kamera: 8MP ine FHD yekurekodha uye LED flash
Battery: 7.250 mAh ine 10W mutoro
Kubatana: 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C OTG, GPS
Ruzha: Vane masipika stereo uye mamaikorofoni mana
Zvese izvi pamutengo wepakati pe219 euros, yakagadziridzwa kwazvo uchifunga nezvehunhu hwayo uye zvese zvingangoitika izvo zvauchazotipa padanho revaraidzo. Sekusagadzikana, hazviuye neGoogle Services pre-yakaiswa, asi iwe unogona kuzviisa iwe pachako gare gare.
Isu takaedzawo maoko ekuchenesa maoko, chigadzirwa chinonakidza icho chine zvakawanda uye zvakawanda maficha. Muenzaniso ndewe kuongorora kwazvino kubva kuTineco, mudziyo wekuchenesa wakabata nemaoko uyo unokwanisa kuzvikwiza wega. Izvo zvinoda kuziva kuti mhando iyi yemafambisirwo inogona kutigonesa isu pazuva nezuva-zuva hwaro.
Mashiripiti anosvika nechena yaro yepamusoro pani. Tine mairi Qi yekuchaja pani isina waya inopa iyo 5W yesimba, yakanakira kudzivirira kukuvadza bhatiri munguva dzehusiku. Isu zvakare tine pano hombe nhamba yemabhatani ayo anotibvumidza isu kugadzirisa uye kugadzirisa yedu Kumuka.
Mutauri uye maikorofoni system
10W Mhedziso simba
2.0 redhiyo sisitimu
1 x 2,25-inch 8W yakazara-renji mutauri
Frequency: 40Hz - 18 kHz ine isingasviki 1% kurasikirwa
Bluetooth 5.0 kirasi 2 (HSP - HFP - A2DP uye AVRCP codecs)
AirPlay uye Spotify Kubatana
Multiroom inoenderana ne ES Smart Spika uye Multiroom renji
3,5 mm Jack yekupinda
Unogona kuitenga pamutengo wakanakisa zvakananga paAmazon kuburikidza IYI BHUKU.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Izvo zvakanakisa tech zvipo zvezuva rababa
5 Zvirongwa zvekugadzira maGIF nekukurumidza uye nyore